साउदीमा आजै दिउँसो ३ बजेदेखि कर्फ्यु ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कोरोना > साउदीमा आजै दिउँसो ३ बजेदेखि कर्फ्यु !
काठमाडौँ । साउदी अरबले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि प्रमुख प्रशासकीय सहरहरुमा लकडाउन गरेको छ ।
बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भने कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको छ । साउदी अरबको राजधानी रियाद, मक्का र मदिनामा लकडाउन गरिएको हो । यी सहरमा आवातजावतमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । साउदी अरबमा झन्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली कामदार छन् ।
कम्पनीले फिल्डमा कार्यरत कामदारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन सुरक्षित रहने उपायहरु दिइरहेको छ । ‘अन्य कम्पनीले कसरी व्यवस्था गरेको छ । थाहा छैन । तर, हाम्रो कम्पनीले सुरक्षा अधिकृतलाई क्याम्प र साइडमा खटाएको छ ।
उनीहरुलाई यसबारे प्रत्येक कामदारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ’, साउदीको दमाम क्षेत्रमा कार्यरत तेजबहादुर थापाले भने,‘कतिफ क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई भने बिदा दिइएको छ । उनीहरुलाई तलब काटिने छैन । कम्पनीले कोभिड–१९ विरामी बिदा भनेर थप गरिएको छ । अब यो बिदा पाउने कसैको पनि तलब काटिने छैन ।’
सहमतिबेगर तलब काट्न पाइँदैन स् साउदीमानव साधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी तथा कामदारको सहमतिबेगर वेतलबी बिदा दिन नमिल्ने जनाएको छ । साउदीले श्रम कानुनलाई पालना गर्न सबै निजी कम्पनी तथा फर्महरुलाई अनुरोध गरेको साउदी प्रेस एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।
‘साउदी श्रम कानुनको अवज्ञा गरी कामदारको इच्छाविपरीत बिनापारिश्रमिक बिदा बस्न बाध्य बनाइएमा उजुरी दिन सकिनेछ । कामदारले सिधै साउदीको श्रम कार्यालय वा साउदीको हटलाइन १९९११ नम्बरमा फोन गरी गुनासो टिपाउन सकिनेछ ।
नेपाली दूतावासको हटलाइन (०५५९३८९६००) मा उजुरी दिन सकिनेछ’, राजदूत राजपुतले भने,‘दूतावासले यहाँका सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल गर्नेछ ।’
नेपाली दूतावासका अनुसार साउदी सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न हिसाबले प्रभावित भएका रोजगारदाता तथा श्रमिकका लागि केही सुविधा दिएको छ ।
साउदी सरकारले आप्रवासी कामदारको आवागमनमा रोक लगाएको मितिदेखि ३ महिनासम्मको श्रम भिसाका लागि तिरेको शुल्क रोजगारदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘रोजगारदाताले कामदारबाट यो अवधिको भीसा शुल्क भनेर कुनै लिन पाउने छैनन् । यसो गरेमा रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्नेछ । कुनै रोजगारदाताले भीसाको शुल्क लिएमा उजुरी गर्नुहोला ।
राहदानीमा भीसा छाप हानेको छ भने पनि यो अवधि गणना हुने छैन’, राजपुतले भने,‘साउदीबाट बाहिर निस्कन भिसा लागेका वा फेरि साउदी आउनको लागि नवीकरण भई आवागमन बन्द भएका कारण प्रयोग नभएका भिसाहरु ३ महिनाको अवधिका लागि बिना कुनै शुल्क म्याद थप हुनेछन् ।’
साउदीले परिचय पत्र (अकामा) को अवधि सकिएमा कामदारले तिर्दै आएको लेबी ३ महिनासम्मका लागि माफ गर्ने र अकामा निस्शुल्क नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
उद्धार समिति गठनगैर आवासीय नेपाली संघ, साउदी अरबले कोरोना भाइरस महामारीबाट कामदारमा आइपर्ने आपत्कालीन परिस्थितिमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्नको लागि उद्धार समिति गठन गरेको छ । समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार रिजाल (जेद्दा), उपाध्यक्ष भोलानाथ पौडेल (दमाम), उपाध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठ (दमाम), उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ (अल–कासिम), कार्यवाहक महासचिव लालबहादुर मगर (जिजान), कोषाध्यक्ष सन्तोष लुइँटेल (जेद्दा) प्रवक्ता विष्णु न्यौपाने (जेद्दा), सल्लाहकार भक्त हमाल (ताबुक) र रियादका क्षेत्रीय अध्यक्ष मेनुका सिटौला ओडारी रहेका छन् ।
साउदीमा गत सातादेखि लागू हुने गरी १४ दिनका लागि होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइएको छ । २३ मार्चदेखि लागू हुने गरी साँझ ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २१ दिने कर्फ्यु छ ।
संघले साउदी अरबलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर बस्दै आएका नेपालीलाई नआत्तिन, नहड्बडाउन, सशंकित नहुन, भ्रमित नहुन र साउदी सरकारले जारी गरेको हरेक नीति निर्देशन पूर्ण रूपमा पालन गर्न आग्रह गरेको छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
२०७६ चैत्र १३ गते ०७:४० मा प्रकाशित
भीमफेदीमा टाटा भ्यान दुर्घटना, दुईको मृत्यु, कमल थापाले गरे उद्दार
अब यसरी लोप हुँदैछ खाना पकाउने एलपी ग्याँस,सिलण्डर के काम ?
नेपालले मागे जति इन्धन दिन मन्त्रीद्वारा निर्देशन
कृषि मन्त्रालयले दियो जानकारी यसपटक रासायनिक मलको अभाव नहुने !